झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो – Kavrepati
Home / समाचार / झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो
झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो
admin August 13, 2021	समाचार Leaveacomment 260 Views
पोखरा- पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा एकाबिहानै चोरी भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित आलुमाइला चोकमा बिहानको १० बजेको समयमा चोरी भएको छ। एकजना अपरिचित व्यक्ति घरको गेट बाट भित्र प्रवेश गर्छन र सुरुमा तल्लो तलामा चोरी गर्ने प्रयास गर्छन।
Previous पुरुषमा यौ’ न इच्छामा कमि आउनुको ४ संकेत !
Next परिक्षण गर्ने भन्दै डाक्टरले प्राइभेट पार्ट हेर्न खोजेपछि…..